nepo Google Pixel 4a 5G haisi kuzokunda chero makwikwi erunako, akanakisa Pixel 4a 5G kesi jazz kumusoro iyi inodhura 5G foni. Kuchengetedza mari yako kwakanyanya, asi ngatitorei chaizvo. Hupenyu hwakapfupika kuti usabhinha kesi dzenhare. Nekutenda, aya maPixel 4a 5G makesi haana kana chinhu asi uye anowedzera mapopu eruvara uye ekuwedzera kuchengetedzwa kuti foni yako iratidze nyowani nyowani.
Tudia DualShield Unganidza Series
Tudia's Merge Series yanga ichichengetedza maPixels makuru uye madiki kwemakore, uye kana iwe uchida imwe inorema-basa rutsigiro rwePixel 4a 5G yako kubva paZuva rekutanga, iyi kesi ichaita basa iri isingasviki pizza hombe.
$ 12 ku Amazon
Google Fabric Nyaya
Nyaya yemucheka yeGoogle inonzwa kunge inoshamisa paPixel 4a 5G sezvayakaita muzvizvarwa zvakapfuura. Gore rino, isu tine dzimwe nzira dzinonakidza dzemuvara seBlue Confetti uye yechinyakare asi yakambo nyanyisa zvakanyanya.
Kubva ku $ 32 kuAmazon Kubva pamadhora mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemashanu paBeche Buy
Kana iwe usingakwanise kugara pane imwe chete inotonhorera kara yako yePixel 4a 5G kesi, tarisa iyo Parallax, iyo inokupa iwe maviri anonakidza mavara mune imwe kesi. Ini ndiri mucherechedzi weBurgundy / Rose Goridhe, asi kune zvakare maviri-toni Aqua Green iri kunyatsotora, futi.
Kubva ku $ 14 kuAmazon $ 19 paWalmart
Bata pasina grime
Spigen Liquid Mhepo
Chassis yepurasitiki paPixel 4a 5G iri nyore kuchengetedza pane mafoni anotsigirwa negirazi, asi kana maoko ako achidikitira, Spigen's Liquid Air inowedzera zvakaomarara manyorerwo kumashure nekumativi.
$ 13 ku Amazon
Tsiva UB Pro
Inowanikwa muBlack, Slate Bhuruu, uye inofadza Metallic Tsvuku, yakakwenenzverwa zvakanyanya kesi dzakateedzana iri pano kudzivirira mari yako nekuwedzera mashandiro muchimiro cheyakavakirwa-mukati muchengeti wechidzitiro uye kiyi yekumira inoshanda mu portrait uye nzvimbo.
$ 22 paWalmart
Inorema basa rekudzivirira
Maona mitsara yakajeka yakatsvuka mumakona eiyi kesi? Iyo gel inokatyamadza, iyo inofanirwa kubatsira yako Pixel 4a 5G kupona masere-tsoka tsoka. Kune zvakare yakavakirwa-mukati yekumira padhuze nepazasi penyaya.
$ 15 ku Amazon
Ipa iyo pizzazz
anccer Rakajeka Akateedzana Ultra Mutete
Kufanana nePixel 4a, isu hatisi kuwana chero anonakidza mavara eiyo Google Pixel 4a 5G, saka wadii kutora yakajeka kesi kuti utore iyo inononoka? Iyo Ruvara Rwakateerana yakatetepa zvekuti unokanganwa kuti iriko, asi ichiri kuwedzera zvishoma kubata.
Inokodzera uye inonyangadza
Inowanikwa mune matatu mavara, iyi TPU kesi inombundira yega yega curve yePixel 4a 5G yako uye kuwedzera kubata pasina kuwedzera huwandu. Ipo anccer iri rakaomarara repurasitiki risina chero kudonhedzwa kudonhedza, X-Level's TPU inowedzera kanenge kashoma kukanganisa kubata
Kubva ku $ 10 kuAmazon
Homwe mukati nekunze
Simicoo Vheji Yematehwe Chikwama
Iyi kesi yefosi ine makadhi matatu nemakadhi emari mukati, asi iwe zvakare unowana yakawedzera kadhi slot kumberi kwenyaya yemakadhi iwe aunoshandisa kazhinji, kunge ID yemudzidzi.
$ 10 ku Amazon
Nhetembo Google Pixel 3a Yakakwenenzverwa Yakajeka Nyaya
Iyo Guardian Series inozivikanwa nemusango wemavara accents - senge iyo acid girini vhezheni inowanikwa pano - asi iyo nhema nhema pane yakajeka yePoetic Guardian inoita kuti iwe uone iyo Google matauriro uchiri kungo chengeta foni kumashure uye kumberi zvakachengeteka.
Kubva ku $ 19 kuAmazon
anccer Achangoberekwa Series
Iyi kodhi-inodzoserwa kesi inokupa wakapfuma unzwe kumashure uchiri kupa irinani kubata uye kudzivirirwa kweTPU pane bhururu. Iyo Newborn Series inouya nemavara mana, kusanganisira tsvuku uye kupwanya bhuruu.
$ 16 ku Amazon
OtterBox COMMUTER DZAKANYANYA Nyaya
Kune vashoma vanogadzira makesi munyika vanozivikanwa uye vanovimbwa seOtterBox. Iyo Commuter Series inokupa iwe mbiri-dziviriro dziviriro usingaite sekuseka tangi-senge seMudziviriri kana Defender Pro.
$ 31 ku Amazon
Ose mavara akanaka
kwmobile TPU Silicone Kesi
Dai iwe waishuvira iyo Pixel 4a 5G yaizowana iyo yemwana bhuruu ruvara senge iyo Pixel 4a - kana chero chero ruvara, chaizvo - kwmobile iwe wawakafukidza, chaizvo. Inowanikwa mune gumi nematanhatu mavara, iyi inokonona idiki silicone kesi ine kana mumwechete mumvuri wakakwana iwe
$ 9 ku Amazon
Yakachena uye yakajeka
Spigen Ultra Mbeu dzakauchikwa
Spigen's hybrid yakajeka kesi inokupa iwe sarudzo yekuti uwane bhureki rakanyatsojeka kana matte nhema bhamba kuti uvanze makona asina kunetsa aunowanzoona pane yakajeka kesi yakatenderedza mativi.
Kubva ku $ 12 kuAmazon
Wedzera bhatiri rako
NEWDERY Bhatiri Yenyaya
Iyo Pixel 4a 5G yatove nehunhu hwakanaka hwebhatiri pachayo, asi kana iwe uri mushandisi-mushandisi, mikana iwe uchiri kuzoda imwe yekuwedzera oomph kuti uichengete iri mupenyu kwemazuva mazhinji. Iyi bhatiri kesi inowedzera mbiri yako Pixel 4a 5G.
Iwo akanakisa eGoogle Pixel 4a 5G makesi anokupa iwe kubata uye kunakidza
The Google Pixel 4a 5G haigone inonakidza minty green color senge iyo Google Pixel 5, asi aya kesi anounza akawanda masitayera uye anowedzera imwe yekuwedzera (kana maviri) ekudzivirira. Iyo Tudia DualShield inotipa cyan bhuruu uye yakasimuka goridhe zvakare ichisimuka zvakakwana kuti igare kwemakore. Zvakadaro, iyo Simisoo Vintage Leather wallet kesi ine yakadzika teal, burgundy, uye inotapira tan kana iwe uri mushure mevamwe vakunda mavara.
Kana zvaunofarira zvichitsvedza zvakanyanya kune zvakapfava uye zvinogara zviripo, iyo Google Fabric Kesi inogadzirwa nezvinhu zvakagadziriswazve asi ichiri kutaridzika uye ichinakidza, ichipa foni yako kubata uye kudzivirirwa pasina kungova imwe yeplastiki snap-on. Jira iri zvakare rinogona kushambiswa nemuchina, saka unogona kushambidza ziya pamwe nemavara kubva kune chero hupenyu hunokandwa kwauri uye nefoni yako.
Iye zvino zvawakadzivirira kumashure kweGoogle Pixel 4a 5G yako, ita shuwa kuti unobata a guru screen mudziviriri kuchengetedza iyo Gorilla Girazi isina kusimba uye isina kukwenya.
Aya ndiwo akanakisa Samsung Galaxy S21 kesi dzaunogona kutenga